IHuawei ifumana isigwebo seenyanga ezintathu kude kube ngu-Agasti 19 | I-Androidsis
Ityala likaHuawei lakutshanje ne-United States limangalisiwe, ngaphandle kwento yokuba, ngendlela ethile, bekulindelwe. Ngaba yinyani leyo ngoku Uvinjelwe ekusebenziseni i-AndroidUkuyishwankathela ngolu hlobo, iwele njengebhakethi lamanzi abandayo kwinkampani yaseTshayina.
Oku, ngaphezulu kwencam ebhekiswe kuHuawei enjalo, kufana nomtya osuka kuDonald Trump kurhulumente waseTshayina. Nangona kunjalo, iHuawei inokuthatha ikhefu leenyanga ezintathu (kude kube ngu-Agasti 19) phakathi kwayo yonke le nto, njengoko ilizwe laseMelika limnike eli xesha ngelayisensi yethutyana ukuqhubeka nokusebenza kunye neemvume.
IHuawei ifumana ilayisensi yokusebenza yexeshana kude kube ngu-Agasti 19
IHuawei inikwe into encinciNjengoko iSebe lezoRhwebo laseMelika liza kukuvumela ukuba uthenge iimveliso ezenziwe e-US ukugcina iinethiwekhi ezikhoyo kunye nokubonelela ngohlaziyo lwesoftware kwiifowuni eziphathwayo zeHuawei, into eyayiphezu kwentambo.
Okwangoku, eli nyathelo alibonisi ukuba iHuawei inokuthenga izinto kunye nezinto ezivela kubavelisi base-US kwizixhobo ezitsha ngaphandle kokuvunywa kwelayisensi ebuzwayo. Ngaphandle koko, enkosi kwezo sele unazo, ungaqhubeka nokuxoxa ngezinto ezahlukeneyo nabenzi baseMelika.
UWilbur Ross, uSosiba wezoRhwebo eMelika, kwingxelo yakutshanje, uthe eli thuba alibhekiswa kuHuawei njengesipho. Ngokwayo, ifuna ukunika ababoneleli ngeenkonzo zonxibelelwano ezahlukeneyo abaxhomekeke kwizixhobo zeHuawei ixesha lokwenza uhlengahlengiso oluthile kwaye bajonge ezinye iindlela ngaphambi kokuvimba inkampani yaseTshayina.
Kwelinye icala, uxelele uKevin Wolf, igqwetha kunye negosa laseburhulumenteni laseMelika Reuters Okulandelayo:
"Kubonakala ngathi injongo kukunciphisa iimpembelelo ebezingalindelwanga kubantu besithathu besebenzisa izixhobo okanye iinkqubo zeHuawei. Kubonakala ngathi bazama ukuthintela ukuphuma kwenethiwekhi. "
Kananjalo, ngeli xesha, IHuawei iya kuqhubeka nokusebenza ngokufanayo, njengoko ibisenza lonke elixesha. Oku kuthetha ukuba iya kuqhubeka nokutyhala uhlaziyo kwizixhobo kwaye inobudlelwane noGoogle kunye nezinye iifemu, ezinje ngeQualcomm kunye neIntel.
“Ilayisensi, esandula ukukhutshwa ukuba ihlolwe luluntu, inciphisa izithintelo ezibekwe ngurhulumente wase-US kwiveki ephelileyo kwiHuawei Technologies Co Ltd. ekuthengeni iimveliso zase-US, ngenjongo yokunceda abathengi abakhoyo […] ilayisensi yethutyana iya kusebenza de kube ngu-Agasti 19. "
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isivumelwano seenyanga ezintathu nxamnye neHuawei